Home Wararka AMISOM oo la wareegtay 11 gaari oo logu talagalay hawlgallka sugidda amniga...
AMISOM oo la wareegtay 11 gaari oo logu talagalay hawlgallka sugidda amniga doorashooyinka
AMISOM ayaa la wareegay kow iyo toban gaari oo loogu talagalay in kor loogu qaado hawlgallka ku aaddan sugidda amniga doorashada dalka.Soomaaliya. Deeqdaan gaadiidka ah oo isugu jira shan Gaari oo gaashaaman iyo lix baabuur oo ah nooca Toyota Land cruiserka ah.waxaa bixiyay xafiiska taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOS).
Dhanka kale, baabuurtaan waxay inta badan ay taageeri doonaan Unugyada Booliska AMISOM ee la shaqeeya Ciidanka Booliska Soomaaliyeed . Ku -xigeenka Ergeyga Gaarka ah ahna Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika (DSRCC) ee Soomaaliya, Simon Mulongo, ayaa maalinimadii shalay gaadiidkaasi ku wareejiyay Taliyaha Booliska AMISOM,ahna, Kaaliyaha Kormeeraha Guud ee Booliska (AIGP), Augustine Magnus Kailie.
Previous articleQabshada Doorashada Guddiga ee G/Waqooyi ee Berri waa Gef weyn oo uu RW Roble u Bareerayo.
Next articleDagaalka u dhaxeeya Ciidamada DFS iyo Al Shabaab ee Galmudug oo waji cusub galay
Waa maxay Sababta uu Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u Wajahayo Eedeymo...
Feeysal cali waraabe oo si aan laga fileeyn uga hadlay uga...